Guddoomiyihi hore ee G/Banaadir oo si kulul uga hadlay falkii lagu xayiray Sheekh Shariif Sh. Axmed | HalQaran.com
Guddoomiyihi hore ee G/Banaadir oo si kulul uga hadlay falkii lagu xayiray Sheekh Shariif Sh. Axmed
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, Taabit Cabdi Maxamed/Sawir Hore/Keydka
Muqdisho (Halqaran.com) – Taabit Cabdi Maxamed, gudoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir ayaa si adag uga hadlay tallaabadii Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed looga hor istaagay inuu ka dhoofo Garoonka Diyaaradaha Aadan Caddde, xilli uu doonaayay inuu gaaro Magaalada Kismaayo.
Qoraal uu soo dhigay Boggiisa xiriirka Bulshada ayaa Taabit Cabdi Maxamed, waxa uu ku sheegay inay tahay arrintaasi mid aad looga xumaado, islamarkaana xilligaan aan loo baahneyn Madaxda dowladda inay ku kacaan falal lagu caburinaayo madaxdii hore ee dalka.
Qoraalka uu soo dhigay Taabit Cabdi Maxamed Bartiisa xiriirka Bulshada ayaa waxa ay u qornayd sidan.
”Waxa ka dhacay Airporka Aadan Cadde waa wax laga wada fajacay oo aanan marnaba la filan karin. Madaxweyne Sharif Sh. Ahmed oo ka mid ah astaamaha dalka, Dowladda rasmiga ee maanta la heystana sababteeda lahaa, in xad-gudubkaa loo geystaa waa CEEB QARAN.” Ayuu yiri Taabit
”Xorriyadda hadalka iyo isu-socodka waa mid ku dhowrsan xeerarka caalamiga ah iyo mida dastuurka dalka. Sharafka iyo karaamada aadanaha waa laguma xadgudbaan, dhowristeedana waa waajib saaran dadka oo dhan, sida ku cad dastuurka dalka.”
Taabit Cabdi Maxamed, ayaa sidoo kale sheegay inuu aad uga xun yahay muwaadiniinta kale ee Somaliyed uu saameeyay falkii dowladda ay ku sameysay Shariif Sheekh Axmed, kuwaasi oo u dhoofi lahaay Magaalada Kismaayo.
”Waxaan sidoo kale aad uga xumahay muwaadiniinta kale ee maanta is-hor-istaagaas uu si guud iyo si gaar ahba u saameysay Dowladda Federaalka waxaa la gudboon in ay si waafi ah mashaqadan jawaab uga bixisaa, iyada oo maanka ku heysa in sharcigii dalka la baal maray wixii maanta ka dhacay Airporka Adan Cadde.”
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabit
Taabit Cabdi Maxamed